Template:Infobox settlement/testcases - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤစာမျက်နှာသည် Template:Infobox settlement ၏ sandbox အတွက် တမ်းပလိတ် စမ်းသပ်နေရာ ဖြစ်သည်။ နမူနာများ၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို တွေ့မြင်နိုင်ရန် ဤစာမျက်နှာကို ရှင်းသန့်ပါ။
more tests အတွက် Template:Infobox settlement/testcases2 ကို ကြည့်ပါ။
၁ Case 0: Linares
၂ Case 1: Detroit
၃ Case 2: Ziketan Town
၄ Case 3: Ponte San Giovanni
၅ Case 4: Gorssel
၆ Case 5: Herāt
၇ Case 6: Baghdad
၈ Case 7: Sequim, Washington
၉ Case 8: Toronto
၁၀ Case 9: Briarcliff Manor, New York
၁၁ Case 10: Briarcliff Manor, New York (with extra parameters)
၁၂ Case 11: Fort Worth, Texas
၁၃ Case 12: Kentucky time zone
၁၄ Case 13: Indiana time zone
Case 0: Linares[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗမာ၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ မွန်၊တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ
Case 1: Detroit[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆောင်ပုဒ်: "Speramus Meliora; Resurget Cineribus"
ကိုဩဒိနိတ်: 42°19′53″N 83°2′45″W﻿ / ﻿42.33139°N 83.04583°W﻿ / 42.33139; -83.04583
[[၁ E+ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၃"။_m²|၁၄၃.၀ စတုရန်းမိုင်]] (၃၇၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၁၃၈.၈ စတုရန်းမိုင် (၃၅၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၄.၂ စတုရန်းမိုင် (၁၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ) 2.9%
၁၂၉၅ စတုရန်းမိုင် (၃၃၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၃၉၁၃ စတုရန်းမိုင် (၁၀၁၃၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၆၀၀ ပေ (၂၀၀ မီတာ)
၆၁၀၀/sq mi (၂၄၀၀/km၂)
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/US' not found.
Case 2: Ziketan Town[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုဩဒိနိတ်: 35°35′19″N 99°59′12″E﻿ / ﻿35.588525°N 99.986558°E﻿ / 35.588525; 99.986558
၃၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၁၅၈ စတုရန်းမိုင်)
၃၁၉၃ မီတာ (၁၀၄၇၆ ပေ)
၃.၃/km၂ (၈.၆/sq mi)
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/CN' not found.
Case 3: Ponte San Giovanni[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၇ စတုရန်းမိုင်)
၁၉၀ မီတာ (၆၂၀ ပေ)
၇၄၀/km၂ (၁၉၀၀/sq mi)
Case 4: Gorssel[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုဩဒိနိတ်: 52°12′N 6°12′E﻿ / ﻿52.200°N 6.200°E﻿ / 52.200; 6.200
၁.၈၀၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၆၉၈ စတုရန်းမိုင်)
Case 5: Herāt[ပြင်ဆင်ရန်]
နာမည်ပြောင်(များ): Pearl of Khorasan
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/Afghanistan" သည် မတည်ရှိနေပါ.Location in Afghanistan
ကိုဩဒိနိတ်: 34°20′31″N 62°12′11″E﻿ / ﻿34.34194°N 62.20306°E﻿ / 34.34194; 62.20306
၉၂၀ မီတာ (၃၀၂၀ ပေ)
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/Afghanistan" သည် မတည်ရှိနေပါ.
Case 6: Baghdad[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၂၆၀.၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈၇၂.၇ စတုရန်းမိုင်)
လူဦးရေ (1987 census)
• ခန့်မှန်း (2011)
၁၇၀၀/km၂ (၄၄၀၀/sq mi)
Case 7: Sequim, Washington[ပြင်ဆင်ရန်]
နာမည်ပြောင်(များ): Sunny Sequim
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/USA Washington" သည် မတည်ရှိနေပါ.Sequim, Washington
ကိုဩဒိနိတ်: 48°4′41″N 123°6′5″W﻿ / ﻿48.07806°N 123.10139°W﻿ / 48.07806; -123.10139ကိုဩဒိနိတ်: 48°4′41″N 123°6′5″W﻿ / ﻿48.07806°N 123.10139°W﻿ / 48.07806; -123.10139
၆.၃၇ စတုရန်းမိုင် (၁၆.၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၆.၃၁ စတုရန်းမိုင် (၁၆.၃၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၀.၀၆ စတုရန်းမိုင် (၀.၁၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၁၈၄ ပေ (၅၆ မီတာ)
၁၀၄၆.၉/sq mi (၄၀၄.၂/km၂)
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/USA Washington" သည် မတည်ရှိနေပါ.
Case 8: Toronto[ပြင်ဆင်ရန်]
အမည်ရင်းမြစ်: From "Taronto", the name ofachannel between Lakes Simcoe and Couchiching, See Name of Toronto
နာမည်ပြောင်(များ): "Hogtown", "The Queen City", "The Big Smoke", "Toronto the Good"
ဆောင်ပုဒ်: Diversity Our Strength
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/Ontario" သည် မတည်ရှိနေပါ.Location of Toronto in Canada
ကိုဩဒိနိတ်: 43°42′N 79°24′W﻿ / ﻿43.700°N 79.400°W﻿ / 43.700; -79.400
၆၃၀.၂၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၄၃.၃၃ စတုရန်းမိုင်)
၁၇၅၁.၄၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆၇၆.၂၅ စတုရန်းမိုင်)
၅၉၀၅.၇၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၂၈၀.၂၁ စတုရန်းမိုင်)
၇၆ မီတာ (၂၄၉ ပေ)
၄၃၃၄.၄/km၂ (၁၁၂၂၆/sq mi)
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/Ontario" သည် မတည်ရှိနေပါ.
ကိုဩဒိနိတ်: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:ISO 3166/data/CA' not found.
Case 9: Briarcliff Manor, New York[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆောင်ပုဒ်: A Village between Two Rivers
ကိုဩဒိနိတ်: 41°8′24″N 73°50′24″W﻿ / ﻿41.14000°N 73.84000°W﻿ / 41.14000; -73.84000
၆.၇ စတုရန်းမိုင် (၁၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၅.၉ စတုရန်းမိုင် (၁၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၀.၈ စတုရန်းမိုင် (၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၃၅၁ ပေ (၁၀၇ မီတာ)
အမြင့်ဆုံး နေရာ (41°09′24″N 73°50′46″W﻿ / ﻿41.15667°N 73.84611°W﻿ / 41.15667; -73.84611)
၅၃၃ ပေ (၁၆၂ မီတာ)
အနိမ့်ဆုံး နေရာ (Hudson River)
၁၂၀၀/sq mi (၄၅၀/km၂)
Case 10: Briarcliff Manor, New York (with extra parameters)[ပြင်ဆင်ရန်]
၃ စတုရန်းမိုင် (၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၁၄ စတုရန်းမိုင် (၃၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၂ စတုရန်းမိုင် (၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၆.၂ ဧက (၂.၅ ဟက်တာ)
၁ မိုင် (၂ ကီလိုမီတာ)
၃ မိုင် (၅ ကီလိုမီတာ)
• ခန့်မှန်း (2017)
၁၈၀၀/sq mi (၇၁၀/km၂)
၇၀/sq mi (၂၇/km၂)
၂၁၀၀/sq mi (၈၀၀/km၂)
• Briarcliff House သိပ်သည်းမှု
၆၂၀/sq mi (၂၄၀/km၂)
Case 11: Fort Worth, Texas[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆောင်ပုဒ်: "Where the West begins"; "Crossroads of Cowboys & Culture"
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/Texas" သည် မတည်ရှိနေပါ.Location within Texas##Location within the United States##Location within North America
ကိုဩဒိနိတ်: 32°45′N 97°20′W﻿ / ﻿32.750°N 97.333°W﻿ / 32.750; -97.333ကိုဩဒိနိတ်: 32°45′N 97°20′W﻿ / ﻿32.750°N 97.333°W﻿ / 32.750; -97.333
၃၄၉.၂ စတုရန်းမိုင် (၉၀၄.၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၃၄၂.၂ စတုရန်းမိုင် (၈၈၆.၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၇.၀ စတုရန်းမိုင် (၁၈.၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
၆၅၃ ပေ (၂၁၆ မီတာ)
၈၇၄,၁၆၈ (US: ၁၅th)
၂၁၈၁.၀/sq mi (၈၄၂.၀/km၂)
၇,၁၀၂,၇၉၆ (US: ၄th)
Lua error in Module:Location_map at line 502: တည်နေရာပြမြေပုံ သတ်မှတ်ချက်အား မတွေ့ရှိပါ: "Module:Location map/data/Texas" သည် မတည်ရှိနေပါ.
Case 12: Kentucky time zone[ပြင်ဆင်ရန်]
Case 13: Indiana time zone[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ (May 2015) Census Report, The 2014 Myanmar Population and Housing Census 2. Naypyitaw: Ministry of Immigration and Population, 31။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Template:Cite gnis. Source for coordinates and elevation.
↑ US Census July 1, 2006 est။
↑ B. Demography and Population။ Afghanistan Statistical Yearbook 2006, Central Statistics Office။ Ministry of Rural Rehabilitation and Development။ 2011-01-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Mortality after the 2003 invasion of Iraq:across-sectional cluster sample survey"။[လင့်ခ်သေ] (242 KB). By Gilbert Burnham, Riyadh Lafta, Shannon Doocy, and Les Roberts. The Lancet, October 11, 2006
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Gazetteer files
↑ Population Estimates။ United States Census Bureau။ July 1, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named FactFinder
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ US Board on Geographic Names။ United States Geological Survey (2007-10-25)။ 2008-01-31 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "GR3" defined multiple times with different content
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ Benson၊ Denise။ Putting T-Dot on the Map။ Eye Weekly။ Archived from the original on November 30, 2007။ December 5, 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Why is Toronto called 'Hogtown?'။ funtrivia.com။
↑ City nicknames။ got.net။
↑ Johnson, Jessica။ "Quirky finds in the Big Smoke"၊ The Globe and Mail၊ August 4, 2007။ Archived from the original on April 16, 2008။
↑ The real story of how Toronto got its name | Earth Sciences (September 18, 2007)။ Archived from the original on December 9, 2011။ February 10, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Template:SCref
↑ ၂၀.၀ ၂၀.၁ Population and dwelling counts, for population centres, 2011 and 2006 censuses။ 2011 Census of Population။ Statistics Canada (January 13, 2014)။ December 11, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Population and dwelling counts, for census metropolitan areas, 2011 and 2006 censuses။ 2011 Census of Population။ Statistics Canada (January 13, 2014)။ December 11, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ Global city GDP 2014။ Brookings Institution။ Archived from the original on June 4, 2013။ November 18, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၁.၀ ၄၁.၁ Fromacowtown to Cowtown။ Archived from the original on September 27, 2011။ October 6, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fort Worth, TX။ March 15, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fort Worth Geographic Information Systems။ Archived from the original on December 21, 2012။ February 14, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT For the Fiscal Year Ended September 30, 2011 : CITY of FORT WORTH, TEXAS (PDF)။ August 27, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ American FactFinder – Results။ United States Census Bureau, Population Division။ May 25, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Infobox_settlement/testcases&oldid=469876" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၄:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။